blog, Studies Case, Xalinta Deegaanka
Mashruuca Bilowga ah Hal mar, in ka badan 4 milyan oo galaan (1,514 milyan oo litir) oo ah wasakhda wasakhda ah ee lagu daweeyay sunta ayaa ku qulqulay Palm Bay Florida ee Turkiga Creek. Natiijo ahaan, Turkiga Creek wuxuu ku jiray heerar aad u sarreeya oo sun ah iyo nafaqooyin waxyeello leh. Xilligii gu'gii 2017, kooxdii ka socotay Gator Dredging waxay waqtigooda intiisa badan ku qaadatay sidii loo nadiifin lahaa wasakhdii markii hore qabsatay Turkiga Creek, iyadoo laga saaray 236,000 yd3 (180,435 m3) oo ah muck, nitrogen, iyo fosfooraska faddarayn. Nooca Saxda ah ee Qalabka Marka aad ka shaqeyneyso mashruuc baaxaddiisu tahay Turkiga Creek, waxaad u baahan tahay nooca saxda ah ee qalabka. Tan awgeed...
Harooyinka Harooyinka Weyn & Dock waxay adeegsadaan Ellicott® Brand dredge "Florida" si ay u soo ridaan 50 milyan oo dhudhun yards oo dhul ah oo laga buuxiyo Source: World Dredging Mining & Construction & International Dredging Review Bishii Ogast 18, 1997, Port of Los Angeles iyo US Army Corps of Injineeradu waxay u dabaal dageen Mashruuca Pier 400, oo ah mashruucii ugu weynaa ee qodista iyo qashin-qubka ee USA, abuurista wadiiqooyin qoto dheer si loogu oggolaado konteynarrada iyo maraakiibta waaweyn ee adduunka ugu waaweyn inay soo galaan Piers-ka cusub ee 300 iyo 400 ee Dekedda. ku dhowaad 600-hektar (242.8 hektar) illaa Dekedda si loo caawiyo ...
Cocoa Beach, Florida Source: Florida Maanta Central Sands waxay isticmaaleysaa calaamadda 'Ellicott® brand Swinging Ladder dredge' si ay u soo gaarsiiso guul weyn toddobaadkan bogsiinta Wabiga Indian Lagoon, isaga oo ka nuugaya tobanaan sano oo malab ah oo u eg mayonnaise kanaalka kanaalka Cocoa Beach. Maalintii Khamiista, qodaalku wuxuu bilaabmay markii shaqaaluhu bilaabeen inay ka soo saaraan buulkii ku dhisnaa kanaalka ku teedsan wabiga Banana River Lagoon. Mashruuca oo ku kacaya $ 2 milyan ayaa waxaa ka mid ah xirida kanaalka Jack / Kent 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha afarta ilaa lixda toddobaad ee soo socota, sida laga soo xigtay Waaxda Maamulka Kheyraadka Dabiiciga ah ee Degmada Brevard. Mashruucu wuxuu u socon doonaa koonfurta, isagoo qodaya shan kanaal oo kale. Bartamaha ...
Waxaa laga soo xigtay: Duuliye Xeebeedka Curry Dekedda Brookings Harbor waa hawl wade ceel cusub oo ay soo iibsatay gobolka Oregon si loogu adeego dekedaha xeebta koonfureed laga bilaabo Reedsport ilaa Brookings. Saraakiisha dekedda Brookings ayaa horseed ka ahaa dadaalka lagu soo iibsanayay ceelkan, gobolkuna wuxuu u xushay dekedda inay kormeerto howlaheeda ka socda xeebta, ayuu yiri Maareeyaha Dekedda Ted Fitzgerald. Dredge, oo ah nooca loo yaqaan 'Ellicott® brand' 360 Swinging Dragon® Dredge ', ayaa ku sugan magaalada Bandon toddobaadkan, iyada oo dekedda ka qodaya 40,000 yaardh cubic oo qashin ah. Qoditaanka cusub ayaa loo isticmaali doonaa in lagu baabi'iyo qashinka sida dhoobada, dhagxaanta, iyo slime-ka lagu ururiyo ...
HARRISON COUNTY, OH (USA) - Qulqulka qaybo ka mid ah harada Tappan Lake ayaa ugu dambeyntii ku bilaabmay qalab dhab ahaantii yaallay iyo dusha biyaha, sida ay sheegtay Barbara Bennett, agaasimaha adeegyada maamulka Muskingum Watershed Conservancy District (MWCD). Arinta ayaa laga wada hadlay kulanki billaha ahaa ee jimcihii la soo dhaafay, kaas oo lagu qabtay Mansfield Charles Mill Lake Park. Bennett wuxuu cadeeyay in 400,000 yaardiyaam oo dhumuc ah oo wasakh ah laga saari doono sagxadda Tappan, oo ka dhici doona meel u dhow Beaverdam Run Bay, Clear Fork Bay iyo labada dhinac ee Wadada Deersville. Qulqulaha waa in lagu faaruqiyo iyada oo la adeegsanayo ...
Kadib safar balaadhan oo ay sameeyeen warshadeeyayaasha dredge adduunka iyo qalabkii hore ee lagu duugi jiray, Cooljarloo Joint Venture ayaa Ellicott® u siiyay mashruuc soo jiidasho leh oo lagu dhisayo laguna dhisayo qulqulka "COLJARLOO I", ee loogu talagalay macdanta culus ee macdanta Galbeedka Australia. Qodista laba jibbaar laba jibaaran, oo shaqadiisa bilaabay bishii Diseembar 1989, ayaa lagu tilmaamay inay tahay qodida ciidda macdanta ugu weyn adduunka iyo tan ugu weyn nooc kasta oo Australia ah.
Abuurista Harooyinka Harooyinka Harooyinka - NRDA Soocelinta Hore ee Mashruuca wuxuu ku lug leeyahay abuurista marsh ka dhex dhaca mashruuc loogu magac daray "Mashruuca Abuurista Harooyinka Harooyinka" ee loo sameeyay laguna maalgeliyey Qorshaha Xeebaha Xeebta Xeebta, Ilaalinta iyo Soo Celinta Sharciga (CWPPRA). Mashruucan wuxuu badalayaa qiyaastii 104 acres oo ciirkariir ah oo la abuuray oo qiyaastii ah 5-6 acres oo dhismayaal dhoobo ah haddii kale laga dhisi lahaa xadka mashruuca CWPPRA. Abuuritaanka Harooyinka Harooyinka Harooyinka - Mashruuca Soo celinta Hore ee NRDA wuxuu abuuri doonaa ku dhawaad ​​104 acres oo marsh ah oo loo yaqaan 'Brackish marsh' halka ay ka tahay 7,300 cagood oo toosan oo dhul beereed ah